MyBrushes - Penda, Dhonza, Sketch, inowanikwa isingasviki euro imwe | Ndinobva mac
Zvekare isu tinotaura nezve chishandiso chinowanikwa muMac App Chitoro nechakakosha dhisikaundi. Tiri kutaura nezve MyBrushes, chishandiso chine mutengo wenguva dzose muMac App Store yemakumi maviri nemakumi mairi emadhora, asi izvo kwenguva shoma tinogona kudhawunirodha isingasviki euro, 0,99 euros. Ichi chinopihwa chiripo kusvika nhasi, saka usafunge nezvazvo zvakanyanya kana iwe wanga uchifunga kuzviwana, asi iyo 30 euros yemutengo wayo yakaita kuti tifunge kaviri. NeMyBrushes isu hatigone kungogadzirisa edu mapikicha avanofarira, asi tinogona zvakare kugadzira mifananidzo inoshamisa iyo inofadza kupfuura imwechete.
MyBrushes inotipa isingagumi yekumisikidza system, sekugona kwatingaita mune yakanyanya graphic dhizaini yekushandisa senge Photoshop kana Pixelmator. Nematanho tinogona kuita chero kuvhiya kunoitika kwatiri, kungave kutevedzera, kuteedzera, kufamba, kutenderera, kuyera iwo… Zvinoitenderawo kuti tinyore zviito zvedu kuitira kuti kana chadzokororwa chiito tinogona kuzviita zvoga pasina kuita matanho ese rimwe nerimwe.
Nezve kugarisana, MyBrushes inotsigira mafomati anonyanya kushandiswa munyika yekugadzirisa mifananidzo: JPG, BMP, PNG, GIF, PDF, PSD, PNT, ARW, BMPF, CUR, CRW, CR2, DCR, DNG, EPSI, EPI, EPS, EXR, EFX, ERF, FPX , FPIX, Fax, FFF, GIFF, G3, HDR, ICNS, ICO, JFX, JFAX, JPE, JFIF, JPF, MPO, MAC, MRW, MOS, NRW, NEF, ORF, PICT, PIC, PCT, PS, PNTG , PNG, QTIF, QTI, RAW, RAF, RW2, RWL, SR2, SRW, SGI, TRIC, TIFF, TGA, TARGA, TIF, XBM, 3FR, 8BPS kutumidza yakanyanya kushandiswa.
Kana tichiendesa kunze kwedu basa tinogona kuzviita mune imwechete faira, kunyangwe kana saizi yayo yakanyanya kukwirira kana isu tichigona kuzviita nemablock. pasina kurasikirwa neota yemhando chero nguva.
Mybrushes-Sketch, Paint, Dhizaini10,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » MyBrushes - Penda, Dhonza, Sketch, inowanikwa isingasviki euro imwe
Heano maApple's Q1 2017 emhedzisiro yemari